Ukunyuka kweNkqubela phambili yeSMB | Martech Zone
Ukunyuka kwe-SMB eqhubela phambili
Inxalenye yokuqonda ithuba lokuthengisa kukuqonda indlela abathengi bakho abazisebenzisa ngayo iimveliso kunye neenkonzo zakho. Abasebenzi bethu bayatshintsha ngokuphawulekayo kwicandelo lamashishini amancinci naphakathi (SMB). Ukuba ishishini lakho lisebenza ii-SMB's, kuya kufuneka uqinisekise ukuba amandla okusebenza akude kunye izixhobo zokusebenzisana Ziyafumaneka ukuze kuphakanyiswe ngokupheleleyo iimveliso kunye neenkonzo.
Ukuba uyi-B2C, qonda ukuba iiyure zomsebenzi ziyatshintsha kwaye imikhwa yokuthenga iyatshintsha. Ngelixa iivenkile ezithengisa iinkonzo zisebenzela abathengi emini nangeempelaveki, i-ecommerce isingatha zonke ezinye iiyure. Ukuba awusebenzisi olu tshintsho kwindlela oziphethe ngayo, uyaphoswa.
Kuyo yonke le minyaka idlulileyo sibonile ukungeniswa kwiqela elitsha le-SMB's - "Inkqubela phambili ye-SMB," imibutho ethe gqolo ukungenelela kummandla wabakhuphisana nabo abakhulu. Kodwa yintoni eyenza ukuba i-SMB iqhubeke? Ukusuka kwi-infographic yeCisco, Ukunyuka kwe-SMB eqhubela phambili.
tags: Intsebenziswanoishishini eliphakathiShishinismbTechnologyyokusebenzela
Novemba 8, 2012 ngo-12: 59 PM
Ndiyavumelana nezimvo zakho, kodwa andizukukhawulela uhlalutyo kwi-B2C, i-B2B ijongene nemeko efanayo.
Novemba 8, 2012 ngo-1: 16 PM
I-infograph entle kunye nokuqonda okuhle malunga notshintsho lwetekhnoloji kunye nentsebenziswano. Ndingazicingela ukuba ndiyinxalenye yabasebenzi abatsha bezentlalo, amaxabiso endiwenziwayo ngoku kunye nokuziqhelanisa namaqhinga e-SMB, eyona ndawo iphambili yokuthengisa xa ndithathe isigqibo sokujoyina iqela labo. Ndicinga ukuba inomdla ukuba abasebenzi abatsha bahlala njani kwi-intanethi nakubomi bokwenyani ngaxeshanye, iyavakala into yokuba sifuna uhlobo olufanayo lokuguquguquka, ukuzibandakanya kunye nokuhamba kwindawo yabo yokusebenza.
Nov 9, 2012 kwi-5: 08 AM
I-infographic enkulu! Qonda okuninzi malunga nenkqubela phambili yeSMB ..
Nov 9, 2012 kwi-5: 28 AM
Esinye isithuba esihle ngomzekeliso. Enkosi infographic nakuwe uDouglas. Kuyamangalisa xa kufuneka ubeke umzekeliso ngento ofuna ukuyithetha ngesihloko sakho. Kwaye ndikholelwe, kuyasebenza kunokuba ubeke konke kwimihlathi emininzi kwaye uyifunde.